Antananarivo Renivohitra Tsy ara-dalàna ny antsasak’ireo fiara sy moto
Nandritra ny hetsika « Aro loza » ny 4 hatramin’ny 10 oktobra lasa teo,
fiara miisa 2 684 no nosavaina, ka ny 1 195 amin’ireo no tsy ara-dalàna. Môtô mitotaly 4 201 ihany koa no voasakana ka ny 2 321 amin’ireo dia tsy ara-dalàna avokoa. Ny tsy fanarahan-dalàna mateti-pitranga indrindra dia ny tsy fanaovana aroloha, ny tsy fahampian’ny taratasina fiara na moto, ny fisiana hosoka amin’ny taratasin’ny moto, ny taingin-telo, ary ny tsy fahaizana ny lalàna mifehy ny fifamoivoizana amin’ny ankapobeny. Hetsika niarahana tamin’ny Fiarahamonim-pirenena, ny Brigade des Accidents, ny avy eo anivon’ny fitsirihana teknika sy ny fiantohana, ary ny avy eo anivon’ny Inspection Générale de la Police Nationale iny “Aro loza” iny. Fampanarahan-dalàna ny mpampiasa lalana araka izany no anton’ny fanakanana sy fisavana ny antontan-taratasin’ny fiara sy ny moto ary koa nisy ny fepetra noraisina ho an’ireo izay tsy nanara-dalàna. Tsy nisy kosa anefa ny sazy ara-bola, fa fampianarana sy fanentanana no natao. Noho ny fahitana ireo salan’isa 445 an’ny lozam-pifamoivoizana teto an-drenivohitra nandritra ny 9 volana voalohany ny 2019 no nahatonga ny fanapahan-kevitry ny polisy hanatanteraka ny hetsika.